Ampidino Malware Hunter 1.48.0.378 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 1.48.0.378 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (28.38 MB)
Ampidino Malware Hunter,
Malware Hunter dia programa iray izay miaro anao aminny viriosy Malware Hunter dia programa antivirus azonao ampiasaina raha te hiaro ny solosainanao aminny malware sy ny viriosy maditra ianao. Malware Hunter, novolavolaini Glarysoft, dia rindrambaiko fiarovana natao hamelana anao mba hijerena sy hanesorana viriosy ao aminny solosainao. Malware Hunter dia mampiasa motera fanamarinana virus ani Avira hamantarana viriosy ary ahazoana valiny marina.
Malware Hunter dia manolotra safidy scanner 3 isan-karazany mba hijerena viriosy. Miaraka aminny safidy Quick Scan, dia zahana ireo lahatahiry sasany izay apetraka matetika ao aminny solo-sainanao ireo viriosy.Ao aminny safidy Full Scan, ny rakitra sy ny lahatahiry ao aminny singa fitehirizana rehetra mifandraika aminny solo-sainanao dia notarafina ary anaovana scan feno. Ny safidy fitetezana manokana, etsy ankilany, dia mamela anao scan ireo lahatahiry nofaritanao.
Malware Hunter dia mamela anao hijerena ireo fisie nofantsinao ary manisy marika ireo rakitra azo antoka mba hahazoany tombony aminizany. Ankoatry ny fitiliana sy fanesorana viriosy, ny Malware Hunter dia manana fiasa fanampiny ilaina ihany koa. Ny endri-javatra fanafainganana ny solosaina aminny programa dia mamakafaka ireo mety ho antony mety hampiadana ny solosainanao ary manampy anao hanafaingana ny fanombohana sy ny fiasanny solosainao aminny alàlanny fanesorana ireo lafin-javatra ireo.
Ny fiasa fanadiovana dia mahita rakitra tsy ilaina sy fako ao aminny rafitrao, manadio ny rezistra ary manome fisentoana ny solosainao.Miaraka aminny Malware Hunter, azonao atao ny manafaka ny toerana fitahirizana ao aminny solosainao.
Malware Hunter Specs
Haben'ny rakitra: 28.38 MB
Miaraka aminny kinova Avira Premium Security Suite vaovao, manova ny anarany ho Avira Internet...
Mahatsiaro ho voaro ianao rehefa mampiasa solosaina. Ary ahoana rehefa mifandray aminny Internet?...
Norton AntiVirus dia programa vahaolana fiarovana voarindra sy matihanina izay manome fiarovana...
Anvi Smart Defender miaro aminny fomba tsy manam-paharoa sy mahery ny solosainao aminny Trojans,...
TrojanHunter dia programa fanesorana viriosy izay manampy anao aminny fanalana viriosy aminny...
DotVPN dia iray aminireo fanitarana VPN ankafizinny mpampiasa Google Chrome. Mamela antsika hiditra...